प्राचीन इजिप्टमा खेल र खेलहरू Absolut यात्रा
प्राचीन इजिप्टमा खेल र खेलहरू
Isabel | | मिश्र
भूमध्यसागरको पुरातन संस्कृतिहरूमा खेलकुदको अभ्यास धार्मिक उत्सव र मनोरञ्जनसँग नजिकको सम्बन्ध थियो। यद्यपि प्राचीन मिस्रमा खेलकुदको अवधारणा अहिलेको भन्दा धेरै फरक छ।
वास्तवमा केही अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन कि उनीहरूले शारीरिक व्यायाम अभ्यास गरे तर यस्तो खेल भनेनन किनकि उनीहरूसँग यो गतिविधिलाई स to्केत गर्न शब्द पनि थिएन। त्यसोभए प्राचीन मिस्रमा खेल कस्तो थियो?
1 प्राचीन इजिप्टमा के खेल थियो?
2 प्राचीन इजिप्टमा कसले खेल खेल्थ्यो?
3 के महिलाहरू खेल खेल्छन्?
4 के खेललाई पुरातन इजिप्टमा तभीको रूपमा मानिन्थ्यो?
5 फिरऊनको चाड के थियो?
6 के त्यहाँ फिरऊन छ जो एक खेलाडी को रूप मा उभिए?
7 नीलले मिश्रमा खेल खेल्नको लागि कस्तो भूमिका खेले?
8 के त्यहाँ मिश्री पौराणिक कथामा खेल संग सम्बन्धित देवता छ?
प्राचीन इजिप्टमा के खेल थियो?
देशको मौसम दिनका धेरैजसो बाहिरी भागमा बिताउनको लागि उपयुक्त थियो र यसले शारीरिक व्यायाम अभ्यासलाई मन पराउँथ्यो, तर वर्तमानमा कल्पना गरिए जस्तो कि खेलको रूपमा अवधारणा नभए पनि। जे होस्, तिनीहरू शारीरिक गतिविधि र राम्रो मांसपेशी टोन बीचको सम्बन्ध राम्रोसँग थाहा थियो।
मौलिक, पुरातन इजिप्टको खेलमा आउटडोर खेल र सैन्य कुश्ती र लडाई प्रशिक्षण समावेश थियो। केहि पुरातात्विक साइटहरूमा मार्टेट आर्टको प्रतिनिधित्व गर्ने छविहरूको साथ चिहानहरू थिए जुन कराटे र जुडोसँग मिल्दोजुल्दो भेटिए। जेरुफको चिहानमा चित्रणको प्रतिनिधित्व पनि भेटियो जहाँ धेरै मानिसहरू झगडा गर्ने स्थितिमा देखिन्छ कि मानौं यो बक्सि match खेल हो।
पुरातन इजिप्टको अर्को खेल हो जसमा अभ्यास भएको थियो एथलेटिक्स। यो छिटो कसले छिटो हेर्न को लागी एक बिन्दुबाट अर्को दौडमा सानो दौड थियो। लामो समय सम्म घर बाहिर हुनु, उनीहरूको लागि कुदाई वा पौडी खेल्न एकदम सामान्य गतिविधिहरू थिए।
छिटपुट प्रकृतिको अर्को खेल गतिविधि मिश्रीहरूले अभ्यास गरेका हिप्पोस, सिंह वा हात्तीहरूको शिकार हो। त्यहाँ कथाहरू छन् कि फिरऊन आमेनहोटेप तृतीय एकै दिनमा 90 ० वटा बैलहरू शिकार गर्न आएका थिए र अमेनहट्टेप द्वितीयले एउटै धनुको साथ पाँच काणहरू तामाको भाँडो छेड्न सके। मान्छेहरूको सन्दर्भमा, उनीहरूले पनि शिकार गरे तर यो एउटा सानो खेल थियो जस्तै खोलामा शिकार नदीमा।
मिश्रीहरूले रथ दौडका साथै तीरंदाजी प्रतियोगिता पनि आयोजना गरे जुन त्यस समयमा खेलकुदको उत्कृष्ट प्रदर्शन थियो।
प्राचीन इजिप्टमा कसले खेल खेल्थ्यो?
हजारौं वर्ष पहिले, आयु लम्बाइ लामो थिएन र इजिप्टमा यो 40० बर्ष भन्दा बढी थिएन। यसैले खेल खेल्ने मानिस धेरै युवा थिए र शारीरिक गतिविधिमा प्रवण थिए।
के महिलाहरू खेल खेल्छन्?
यद्यपि तपाइँले अन्यथा सोच्न सक्नुहुन्छ, पुरातन मिश्री महिलाहरू खेल खेल्थे तर तिनीहरू रेसि,, शक्ति वा पानीसँग सम्बन्धित थिएन तर एक्रोब्याटिक्स, विकृति र नाचसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू थिए। त्यो हो, महिलाहरूले निजी भोज तथा नृत्यकर्मीहरू र एक्रोबेट्सको रूपमा धार्मिक उत्सवहरूमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्। आज हामी भन्न सक्छौं कि यी महिलाहरूले लयबद्ध जिम्नास्टिकसँग मिल्दोजुल्दो गरे।
के खेललाई पुरातन इजिप्टमा तभीको रूपमा मानिन्थ्यो?
रोमन वा ग्रीक जस्ता अन्य व्यक्तिहरू जस्तो, इजिप्टमा खेलकुदलाई तमाशाको रूपमा लिइएको थिएन। पुरातात्विक उत्खननमा फेला परेका छविहरू र प्रतिनिधित्वहरूका माध्यमबाट ठूला स्थानहरू वा ठूला खेल कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित परिदृश्यहरूमा सन्दर्भ पाउन सम्भव छैन।
यसको मतलब यो छ कि पुरातन इजिप्टमा त्यहाँ ओलम्पिक खेलजस्तो कुनै चीज थिएन मिश्रीहरूले निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरे र केवल रमाइलोको लागि गरे। त्यहाँ एक दर्शक पनि थिएन।
यद्यपि, अपवादको रूपमा, त्यहाँ एक चाड थियो जुन फिरऊनहरूले अभ्यास गरे र त्यो कुनै तरिकामा खेलकुद घटनासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। यो उत्सव आयोजना भएको थियो जब सम्राटहरूले तीन दशकहरूको लागि शासन गरिरहेका थिए, त्यसैले त्यतिबेला जनसंख्याको कम आयु हुने भएकोले यो विरलै उत्सवको रूपमा मनाइएको थियो।
फिरऊनको चाड के थियो?
यस पर्व-वार्षिकोत्सवमा haraoh० बर्षको राजाको शासनको अवधिमा, राजाले एक प्रकारको अनुष्ठान दौडमा वर्ग बाक्लो यात्रा गर्नु पर्थ्यो जसको उद्देश्य आफ्ना मानिसहरूलाई आफू अझै जवान छ भनेर देखाउँनु थियो र राजाको शासन जारी राख्नको लागि पर्याप्त जोस थियो। देश।
यस प्रकारको पहिलो चाड reign० बर्षको शासन पछि र त्यस पछि हरेक तीन बर्षमा मनाइन्थ्यो। उदाहरणका लागि, यो भनिन्छ कि फारो रम्सेस द्वितीय n ० बर्ष भन्दा बढीको साथ मरे, त्यसैले उनीसँग विभिन्न उत्सवहरू गर्न प्रशस्त समय हुने थियो, त्यो समय भित्र अपवाद हो।
के त्यहाँ फिरऊन छ जो एक खेलाडी को रूप मा उभिए?
फारो रम्सेस द्वितीय धेरै लामो समयसम्म बाँचेका थिए र धेरै उत्सव-वार्षिकोत्सवमा भाग लिएका थिए तर त्यो थियो Amenhotep II जो एथलेटिक सम्राट को प्रोटोटाइप मानीयो, एक सौंदर्य वा शारीरिक दृष्टिकोणबाट।
नीलले मिश्रमा खेल खेल्नको लागि कस्तो भूमिका खेले?
नील नदी त्यस समयमा मुलुकको मुख्य राजमार्ग थियो, जहाँबाट सामानहरू सारिएका थिए र मानिसहरू यात्रा गरिरहेका थिए। यसको लागि, डुing्गा र डु sa्गा डु sa्गा प्रयोग गरियो, त्यसैले मिश्रीहरू यस अनुशासनमा राम्रो थिए।
त्यसकारण नील नदीमा उनीहरूले डु competition्गा वा पौडी खेलेर केही निजी प्रतिस्पर्धाको आयोजना गर्न सक्थे, तर उनीहरू सार्वजनिक रूपमा टूर्नामेंट थिएनन् जहाँ विजेतालाई सम्मान गरिएको थियो।
माछा मार्ने सन्दर्भमा, कागजात राखिएको छ जसले त्यो देखाउँछ नील नदीमा त्यहाँ एक निजी प्रकृतिको केहि प्रतियोगिताहरू थिए कि कसले सबैभन्दा बढी समात्ने सक्षम छ भनेर हेर्न।.
के त्यहाँ मिश्री पौराणिक कथामा खेल संग सम्बन्धित देवता छ?
पुरातन इजिप्टमा जीवनका प्रायः सबै क्षेत्रका देवताहरू थिए तर उत्सुकताका साथ खेलका लागि होइन किनभने मैले अघि नै भनें कि त्यतिखेर आजको खेल जस्तो खेलको पनि कल्पना गरिएको थिएन।
यद्यपि, मिश्रीहरू यदि उनीहरूलाई जनाइएको गुणहरूको लागि पशुहरूको आकारमा देवताहरूको पूजा गर्थे भने। यसको अर्थ, चराको शरीरसहितका देवताहरू तिनीहरूको चपलता र उडान गर्न सक्ने क्षमताको लागि प्रशंसा गरिएको थियो, जबकि गोरूको आकारका देवताहरू यी प्राणीहरूको बलले गर्दा भएका थिए, जसरी गोहीहरूजस्ता अरू जनावरहरू पनि हुन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » प्राचीन इजिप्टमा खेल र खेलहरू
गुलाबी ताल, डु Hill्गा हिलियरमा डुब्नुहोस्
मात्रीशोकाको इतिहास, रसियन गुडिया